Tag Archive for "आशिक बदली" - आज देशभरकै मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली, बिस्तारै मनसुनी गतिविधि बढ्दै
आज देशभरकै मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली, बिस्तारै मनसुनी गतिविधि बढ्दै
काठमाडौं । पूर्वबाट चार दिनअघि नेपाल प्रवेश गरेको मनसुन पश्चिम क्षेत्रसम्म फैलिएको छ । देशका पश्चिम क्षेत्रमा आइतबार बेलुका तिरै मनसुन पुगेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । अब बिस्तारै मनसुनी गतिविधि बढ्दै जाने जनाइएको छ । मौसमविदका अनुसार सोमबार देशभरकै मौसम आंशिकदेखि समान्य बदली हुनेछ । आइतबारको तुलनामा केही कम रहे पनि देशभरको मौसम बदली हुने देखिएको मौसमविद मीनकुमार अर्यालले बताएक... थप पढ्नुहोस्
आज देशका पूर्वी तथा मध्य भूभागमा सामान्यदेखि आंशिक बदली !
काठमाडौं । देशका अधिकांश स्थानको मौसम शुक्रबार सामान्यदेखि आंशिक बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । देशको पूर्वी तथा मध्य क्षेत्र साथै पश्चिमी पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली र बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहने मौसमविदले बताएका छन् । पूर्व तथा मध्यका केही स्थानहरुमा साथै पश्चिमका थोरै स्थानहरुमा मेघगर्जन सहित वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।... थप पढ्नुहोस्
आज पनि मौसम बदली : बेलुकातिर मेघ गर्जनसहित वर्षा सम्भावना !
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभर केही भागमा आज मंगलबार पनि मौसम सामान्यदेखि आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । विभागका अनुसार प्रि मनसुन सुरु भएदेखि लगातार रुपमा सक्रिय मौसम केहीबेर खुलेको जस्तो हुने र पानी पर्ने जारी रहेको छ । मध्य र पूर्वका केही स्थानमा तथा पश्चिमका थोरै ठाउँमा मेघ गर्जनसहित वर्षाको सम्भावना रहेको छ । यस्तै हावाहुरी पनि चल्ने मौसमविदले बताएका छ... थप पढ्नुहोस्
देशका अधिकांश भागमा बिहानैदेखि बदली, बेलुकातिर मेघ गर्जनसहित वर्षा !
काठमाडौं । देशभरको मौसम सोमबार पनि बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । देशका अधिकांश भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने मौसमविद सुवास रिमालले बताएका छन् । बिहानैदेखि देशका अधिकांश क्षेत्रमा बदली भएको छ । विशेष गरी मध्य क्षेत्रमा सामान्य बदलीको अवस्था छ भने पूर्व र पश्चिमका क्षेत्रमा आंशिक बदली रहेको मौसमविद रिमालले बताए । दिनभरिकै मौसम यस्तै रहने जनाइएको छ । प्रि मनसुनको समय रह... थप पढ्नुहोस्
आज मध्य र पश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदली हुने सम्भावना !
काठमाडौं । देशको पूर्वी क्षेत्र बाहेक सम्पूर्ण भूभागको मौसम मंगलबार सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । पूर्वी क्षेत्रको मौसम आंशिक बदली हुने सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन् । बाँकी क्षेत्रको मौसम सामान्यतया सफा रहे पनि अपराहन्नपछि वा बेलुकातिर मध्य र पश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदली हुने सम्भावना रहेको छ । पूर्वका थोरै ठाउँमा मेघगर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भाव... थप पढ्नुहोस्
आज पूर्वी, मध्य र पश्चिममा मेघ गर्जनसहित वर्षा हुने सम्भावना !
काठमाडौं । देशको पूर्वी क्षेत्र तथा मध्य र पश्चिमका पहाडी क्षेत्रको मौसम आइतबार आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । बाँकी क्षेत्रको मौसम भने सामान्यतया सफा रहने मौसमविदले बताएका छन् । पूर्वका केही ठाउँमा र मध्य र पश्चिमका एक वा दुई ठाउँमा मेघ गर्जनसहित वर्षाको सम्भावना रहेको जनाइएको छ । बेलुकातिर केही क्षेत्रमा हुरी बतास चल्ने सम्भावना पनि छ । यस्तै आइतबार राति देशका पहा... थप पढ्नुहोस्
देशका अधिकांश भूभागमा तीन दिनसम्म हावाहुरीसहित वर्षा !
काठमाडौं । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज बिहीबार देशका अधिकांश भूभागमा आंशिक बदली रहने जनाएको छ । महाशाखाले देशका पश्चिमी र मध्य भूभागमा र पूर्वी भूभागका पहाडी क्षेत्रमा आंशिक देखि सामान्य बदली हुने सम्भावना रहेको जनाएको छ । देशका पश्चिमी र मध्य भूभागका केही स्थानमा र पूर्वी भूभागका केही स्थानमा मेघ गर्जन तथा हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना रहेको पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । त्यसैगरी ... थप पढ्नुहोस्
आज देशभरि आंशिक बदली : हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं । शनिबारदेखि मौसममा आएको परिवर्तनका कारण आइतबार बिहानदेखि बदली भएको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले भारतको राजस्थानमा बनेको न्यूनचापीय क्षेत्र, पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको प्रभावले मौसममा बदली भइरहेको बताएको छ । आज देशभरि बिहानीपख आंशिक बदली रहने महाशाखाले जनाएको छ । अपरान्ह पछि देशका मध्य र पश्चिमी पहाडी क्षेत्र लगायत पूर्वी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानहरुमा मेघ... थप पढ्नुहोस्
यसो भन्छ, अबको तीन दिनबारे मौसम पूर्वानुमान महाशाखा
काठमाडौं । मौसम विभागले मंगलबार दिउँसो देशको पुर्वीलगायत मध्यपहाडी तथा पश्चिमी पहाडी भूभागहरुमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ भने बाँकी भूभागहरुमा आंशिक बदली रहनेछ । अपरान्ह पश्चात देशको पुर्वी भूभागका थोरै स्थानहरुमा र पश्चिमी पहाडी तथा मध्यपहाडी भूभागका एकदुई स्थानमा मेघगर्जनका साथ हावाहुरी सहित क्षणिक वर्षाको संभावना देखिएको महाशाखाले जनाएको छ । मंगलबार राती देशको पुर्वी भूभाग लगायात मध्यपहाडी... थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । आइतबार साँझ आएको विनाशकारी हावाहुरीबारे समयमै जानकारी दिन नसकिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक सरजु कुमार वैद्यका अनुसार चितवनमा सिर्जना भएको हावाहुरीले पर्सा हुँदै बारासम्म प्रभाव पारेको थियो। जहाँ आवश्यक उपकरण र सफ्टवेयरको अभावका कारण मौसम पूर्वानुमान गर्न नसकेको हो । स्थानीय वायुको प्रभाव र मौसममा हुने बदलीबारे जानकारी दिन सक्ने प्रणालीको अभावका कारण आफ... थप पढ्नुहोस्